Mustaqbalka Safarka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Mustaqbalka Safarka
gaadiidka, qaab kasta, waa laf dhabarta dal kasta iyo dhaqaalaheeda. Waxay ahayd kaliya wadooyinka, rail, iyo hawada aan ugu suurta gelinay inaan ku xirno adduunka qaab aad uga yar sidii ay dhab ahaantii tahay. Sayidka, markaan eegno warshadaha waaweyn ee adduunka, gaadiidku waa midka ugu firfircoon, oo had iyo jeer isu beddelaya wanaajinta mustaqbalkeenna.
Isbeddellada dhowaa ee safarka iyo warshadaha gaadiidku waxay ku wajahanaayeen abuurista xulashooyin cagaar ah. Tallaabooyin aad loogu baahan yahay si loo badbaadiyo deegaankeenna, horumarada cusub ee gaadiidka ayaa haddaba durbaba ka shaqeynaya mabda'aan. Si kastaba ha ahaatee, horumaradaani waxay sidoo kale jabinayaan xuduudaha sida aan u soconay qarnigii la soo dhaafay. Iyo iyadoo tan la sameeyo, waxay na hogaaminayaan mustaqbal safar oo dhakhso badan, ammaan, iyo macno ahaan ka baxsan dunidan.
Mustaqbalka Safarka: Dalxiiska Booska
Boosku wuxuu ahaa mudnaanta ugu dambeysa ee aadanaha mudada ugu dheer. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii aan cagta marineynay dayaxa sannado kahor, Ma jirin wax la taaban karo oo ka farxiya dadweynaha guud. Hadda inkastoo, waxaa jira tartan socda oo dadka lagu geeyo meel bannaan, madadaalo. Dalxiiska hawada waa shayga xiga ee weyn, iyo inta laga yaabo inay qaali tahay oo keligeed tahay, waa tallaabo weyn oo loo qaado mustaqbalka, taas oo suurtogal u noqon doonta dhammaan gumaysiga Mars ama sameynta saldhigyo bannaan oo lagu noolaado halkaasoo boqolaal qof ay ku wada noolaan karaan. Si kastaba ha ahaatee, halka saynisyahannaduna laga yaabaa inay qaadaan tallaabo jihada saxda ah, waxaa suuragal ah inaan sugno dhowr qarni kahor inta horumar muuqda oo la arki karo uusan muuqan.
Dusseldorf tigidhada Munich
Loogu deeqay tikidhada Munich
Tigidhada Paris ilaa Munich
Tikidhada loo yaqaan Bonn illaa Munich
Warshadaha Safarka iyo Gaadiidka: Baabuur wadis la'aan
Weydii qofkasta fikradooda ku saabsan gadiidka mustaqbalka, waxayna u badan tahay inay xusaan gawaarida aan wadista wadin. Waxaa horeyba u jiray tareeno ku kala baahsan adduunka oo ka shaqeeya mabda'aas. Waxaa intaa dheer, waqtiga ugu dheer, saynisyahano iyo hogaamiyaasha wershaduhu waxay ka shaqaynayeen sidii wadooyinka looga dhigi lahaa mid nabdoon iyadoo lagu daro tikniyoolajiyadda maalinlaha ah khibradda wadista. Waxa ka dhigaya gawaarida aan wadista lahayn inay u qalmaan sugida ayaa ah inay si buuxda u beddeli doonto warshadaha siyaabo badan. Laga soo bilaabo in ka badan deeggaanka u fiican amniga wadada, dadku waxay awoodi doonaan inay daboolaan masaafada dhaadheer iyada oo aan la haynin culeys ay ku qasbeyso inay baabuur waddo saacado.
Mustaqbalka Safarka: Tareenadu
Mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn noocyada gaadiidka dadweynaha ku dhowaad, tareenadu wali si cad ayey boos ugu leeyihiin mustaqbalkeenna. Si la yaab leh, laga yaabee in ka badan sidii hore. Xitaa maadaama tikniyolo cusub loo sameeyay inay ka dhigaan nidaamyada tareenka mid aamin ah, dhakhso, iyo in ka badan oo ku habboon, Baahida aasaasiga ah ee nidaamka noocan ahi waxay u kordheysaa si aan caadi ahayn. Tareenadu horeyba waa shay u dhigma bulshada sida kuwa taajiriinta ah oo badanaa raaciya kuwa ugu liita ee fasalada shaqada laakiin sababtoo ah koritaanka degdega ah ee tirada dadka aduunka, gaar ahaan wadamada warshadaha ka shaqeeya, nidaamyada tareenka oo hufan oo la awoodi karo waxay muhiim u noqon doontaa la-dagaallanka ciriiriga taraafikada. Tani waxay sidoo kale saameyn weyn ku yeelan doontaa jawiga maadaama tareenadu awood ugu yeelan doonaan inay si hufan ugu shaqeeyaan tamarta nadiifka ah isla mar ahaantaana ay ka qaadayaan gawaarida gaaska culus ee wadada maraya iyo yareynta qiiqa hawada CO2.
Tigidhada Munich ilaa Zurich
Tigidhada Berlin ilaa Zurich
Basel ilaa tikidhada Zurich
Tigidhada Vienna ilaa Zurich
Hyperloop waxaa lagu sharaxay “habka ugu horreeya ee cusub ee ugu weyn gaadiid gudaha 100 sano. ” Waxay ku lug leedahay socodka xawaaraha sare ee gudaha tuubada, isku xidha hal meel oo mid kale leh. Hyperloop waxaa suurtogal ah in loo isticmaalo xamuul iyo xamuul labadaba. Si kastaba ha ahaatee, inkasta oo enloniga loo yaqaan 'Elon Musk' uu safka hore kaga jiro teknolojiyaddan, wadamada qaar waa shaki ka qaba Hyperloop iyo haddii ay run ahaantii mudan tahay maalgashi. Si kastaba ha noqotee, Ku safridda qaabkan cusub ee gaadiidku waxay ku dhowdahay xaqiiqda tan aan filaynay, iyada oo tijaabooyin iyo dhismaha tuubooyin tuubooyin horeyba uga sii socday Kaliforniya iyo suuragal Yurub goor dhow.
Hamburg ilaa tikidhada Kobanheegan
Rotterdam ilaa Hamburg tigidhada
Midkani wuxuu si gaar ah ugu yahay dadka safarka curyaanka ah, kuwaas oo jecel inay booqdaan meelo cusub laakiin doorbida inay taas ka helaan raaxada guryahooda. In kasta oo VR horeyba u ahaan jirtay ganacsi, goor dhaw, waxaan arki doonaa is dhexgalka u dhexeeya VR, IR, iyo AR, taasoo horseedaysa waayo-aragnimo u dhow nolosha-dhabta ah intii suurtagal ah. Laga soo bilaabo booqashada toddobada cajiibka ah ee adduunka illaa laga quusto 'Great Barrier Reef', Tiknolojiyaddan cusubi waxay dadka ka caawin doontaa inay adduunka u arkaan sidii hore weligeed.
Waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawino helitaanka xulashooyinka tigidhada ugu fiican ee la heli karo. Dalbo tigidhkaaga tareenka oo leh Save A tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Mustaqbalka Safarka” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffuture-of-travel%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
In link soo socda, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- link this waa wadooyinka Ingiriisi bogagga degtey, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, waxaadna ku bedeli kartaa pl si fr ama nl iyo luqado badan oo aad doorato.
FutureofTravel SpaceTourism TrainSystems tareen safarka TravelandTransportation
Restaurant Week In Netherlands The
Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe